Maro ireo faritra ara-pombantany no fady kisoa, maro ihany koa ireo havana Silamo, izay misy fomba manokana ny hamonoana ireny biby ireny. Nefa dia hita fa maro ireo labatoara, no atokana kely amin'ny sisiny fotsiny hitodika any La Mecque ary misy Silamo manao ny fomba. Maro ireo hena izay soratana fotsiny hoe "Halal", nefa ny ankamaroany dia tsy nanaja tanteraka izay fomba « Dhabiba » izay fa dia notononina fotsiny ny « Bismillah Allahou Akbar ».
Misy fepetra maro anefa ny maha hena "Halal", na ny fikarakarana ilay biby, ny fomba famonoana azy, ny fanadiovana azy. Nefa ireo havana Silamo tsy afaka tanteraka nanao izay noho ny tsy fisian'ny Labatoara azy ireo manokana, na fitokanana amin'ireo labatoara, ny veterinera avy nitsara kisoa ihany ohatra no misasa fotsiny mitsara ny hena "Halal".
Ireo fady kisoa, dia mikipy maso fotsiny fa na ny toerana hitsarana ny kisoa dia eny ambony ankalana fitsarana omby ihany, ny balance ampiasaina sy vatomizana dia iraisana daholo ihany.
Mila fanatsarana goavana izany ity seham-pihariana ity, satria dia iankinan'ny fahasalamam-bahoaka. Fanajana ny soatoavina, ny fomba sy ny finoan'ny tsirairay.
Betsaka amin'izao ny fiompiana akoho fakana nofony, nefa tsy manana labatoara manokana momba izany eto amintsika, fa samy mamolovolo sy mikarakara ny azy any amin'ny toeram-piompiana avy any, dia tsy mahagaga raha maimbo ny toerana, ary mety ahiana ny fahadiovana sy fihanaky ny aretina.
Mampiady ireo mpiara-monina mihitsy na ny tabataba fiompiana ny biby, tabataba amin'ny famonoana azy, ary fofona ateraky ny loto samihafa.
Misy anefa ny vahaolana amin'ny fametrahana foto-drafitrasa manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena, ara-pahasalamana sy manaraka ny fomba Silamo na "Halal" ho an'ireo manaraka izay finoana izay.
Vitsy ireo mpandraharaha no miditra amin'ity sehatra ity, nefa dia lalam-pihariana tena mahomby.
Ny fanjakana ihany koa tokony hametraka politika ara-pahasalamana, izay ahitana ny fanohanana mavitrika ireo mpiompy, ny fahasalaman'ny biby, ny vakisiny sy ny fitsaboana, ny fanofanana ireo mpiompy, fampianarana ireo mpianatra ho teknisianina momba ny fiompiana, na ny fitaterana azy rehefa entina amidy na ho vonoina, na ny toerana famonoana azy, ny fitehirizana azy amin'ny trano mangatsiaka, ny fitaterana azy eny an-tsena hitazona izay hatsaran'ny hena izay, ny fivarotana azy, tsy ho azon'ny vovoka sy setroka eny an-tsisin'ny arabe rehetra eny.
Betsaka ireo manamboatra saosisy amin'ny ambin-kena efa vizana nitapy masoandro, atsentsina amin'ny fati-kena tsy lany rehetra, misy ny manisy rano anatiny mihitsy ampibotsina azy.
Ao ihany koa no mamerina mampiditra anaty chambre froide na trano mangatsiaka ny hena tsy lafo ny hariva, ao ny manisy barre glace amboniny. Tsy vitsy ny manindrona rano ny akoho fakana nofo ampitombo lanja aza.
Ilaina arak'izany ny fametrahana manerana ny nosy fotodrafitrasa manaraka ny fenitra tekinika sy ara-pahasalamana, izay ireo matihanina momba izany no tokony hisehatra azy. Ilaina koa ny fanofanana ireo mpisehatra rehetra amin'ity resaka fiompiana sy fitaterana ary fivarotana hena fihinana ity.